मोदीको नेपाल भ्रमण आत्मघाती ! डा. गोपाल शिवाकोटी “चिन्तन”ले किन भने यस्तो::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
प्रकाशित मिति - शनिबार, जेष्ठ ५, २०७५
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वैशाख २८–२९ गतेसम्म नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । तेस्रोचोटी नेपाल आएका मोदी जनकपुर, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ डुले भने काठमाडौंमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा सामेल भए । त्यत्तिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदीले काठमाडौंबाटै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना शिलान्यास गर्दै १६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । यो भ्रमणलाई स्वयम् मोदी, भारतीय पक्ष र नेपाल सरकारले समेत ऐतिहासिक, सफल र उपलब्धिमूलक रहेको टिप्पणी गरिनैसकेका छन् । तर, राजनीतिक विश्लेषक डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ले भने फरक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को कानुनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक डा.सिवाकोटीसँग मोदी भ्रमणबारे एभरेष्ट टाइमले गरेको कुराकानी ।
यो गलत बुझाई हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाली निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई त यस्ता राम्रो आयोजनाहरु बनाउन नै दिइन्न । राम्राजति आयोजनाका लाइसेन्सहरु सबै भारतीयका हातमा पुगेका छन्, पुग्दैछन् । चिलिमे (२२ मेगावाट) र माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को ढाँचामा अब नेपाल र नेपालीले अरुण ३ र माथिल्लो कर्णालीजस्ता सबै आयोजनाहरु निर्माण गर्न सक्नेछन् । मुख्य कुरा हो, अवसर र क्रमिक क्षमतावृद्धिको । छिमेकी वा विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, पश्चिम सेतीकै जस्तो ढाँचामा । मुख्य कुरा, हाम्रा आयोजनाहरुमा हामी मालिक हुने हो ।
व्यवस्थापनमा हिस्सेदार हुने हो । सस्तोमा उत्पादित बिजुलीको पहिलो बजार नेपाल हुनुपर्दछ भन्ने हो, न कि निर्यात । मुलुकको दैनिक घरेलु आवश्यकता र औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक बिजुली निर्यात गर्नु भनेको नेपाललाई सँधै अन्धकारमा राख्नु हो । नेपाललाई कहिल्यै पनि विकसित हुन नदिनु हो किनकि राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नै प्रत्येक मुलुकको आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको मुख्य आधार हो ।